Umhla My Pet » Hawaii – Visting na isilwanyana sakho
ngokuthi Pet ezinika
ukubuyekezwa: Apr. 02 2020 | 3 min ukufunda
SaseHawaii Ngolwasuku ivideo State ngexesha Continental United States azikho, ngoko ke izilwanyana babengavunyelwa waya eHawaii ngaphandle baya yedwa.
The Hawaii mthetho ingqalelo ukubaluleka abahambahambayo abanini pet watshintsha imithetho ukuze iindwendwe ukuba Islands kunokuzisa ngesilo kunye. Okwangoku le migaqo isebenza kuphela Dogs & Cats.
Bada bacinga nokuba abangalenzanga kube lula kwaye kuyabiza, ukuba ulungise kakuhle baya kukhupha izilwanyana zakho kuwe ngokukhawuleza xa ufika e Honolulu moya.
inyathelo lokuQala – weZilwanyana Certificate – Kufuneka iSetifiketi – efotokopiweyo. Esi siqinisekiso kufuneka esikhutshwe wezilwanyana yakho ingabi ngaphezu 14 iintsuku ngaphambi kokufika lakho Hawaii.
zogonyo: Isilwanyana kufuneka zigonywe ubuncinane kabini yobomi bayo sinomgada nabo ugonyo kufuneka ngaphezu 90 iintsuku ngaphandle. Ukuba sokugonya-mvume sonyaka omnye-ngoko umele ukuba kwenziwe ugonyo yakutshanje ingabi ngaphezu 12 iinyanga ngaphambi kokufika kwalo pet e-Hawaii. Ukuba sokugonya-mvume nyaka-3, ke ngoko kufuneka kwenziwe ugonyo yakutshanje ingabi ngaphezu 18 iinyanga ngaphambi kokufika Hawaii. Nokuba imeko ugonyo yamvanje kufuneka eyenziwayo hayi ngaphezulu 90 iintsuku ngaphambi kokufika Hawaii.
Isiqinisekiso ukusuka wezilwanyana yakho kufuneka uchaze umhla ugonyo lwakutshanje, kunye nomhla ugonyo yangaphambili. Isiqinisekiso kufuneka akhankanye igama sokugonya, iqashiso okanye inani lothotho, lokomeleza lokuphumla, umhla ugonyo, umhla wokugqiba nokuba ingaba ibikho luhlobo lwelayisenisi konyaka omnye okanye emithathu.
Impilo entle: Isiqinisekiso kufuneka ichaze ukuba isilwanyana sempilweni entle kwaye ukuba uye waphathwa amakhalane ingabi ngaphezu 14 iintsuku ngaphambi kokufika eHawaii imveliso Fibronil okanye nezaleyo mveliso kwantlandlolo. Bonisa kwisiqinisekiso umhla unyango kunye Imveliso esetyenzisiweyo.
inyathelo ezimbini – Microchip Isiqinisekiso ukusuka wezilwanyana yakho kufuneka uchaze inani Microchip kwaye kufuneka siqulathe yokuba wezilwanyana unako ukuvavanya isiXhoza ngempumelelo.
IsiXhoza kufuneka kwimbambano umgangatho US (ukufunda) okanye (Kwakhona ekhaya) uhlobo. Lo Microchip kufuneka ziphinde phambi uvavanyo igazi pet ngayo.
inyathelo ezintathu – OIE-FAVN Umgada Blood Uvavanyo Umele ukuba isiqinisekiso yilebhu evunyiweyo ebonisa ukuba iziphumo zovavanyo inkulu kune okanye ilingana 0.5IU / ml. Isiqinisekiso kufuneka ubonise inani izilwanyana Microchip. Uvavanyo igazi kufuneka kwenziwe ingabi ngaphezu 18 kweenyanga hayi ngaphantsi 120 iintsuku ngaphambi kokufika Hawaii.
kufuneka ugqirha wakho athathe isampuli yegazi ukusuka isilwanyana sakho nolwalama- ukuba:
inyathelo lesine – Isicelo Thumela uqobo la maxwebhu – iikopi ukuba:
Valela Branch Animal
iea, Hawaii 96701
Leta itshekhi kwiitila okanye umyalelo imali kwimali $165.00 pet nganye.
Amaxwebhu kunye Itshekhi kufuneka zifike 10 kwiintsuku phambi kokufika kwalo pet ngayo. Ukususela amaxwebhu akuna lungiselelwa wezilwanyana bakho ngaphezu 14 iintsuku phambi kokufika kufuneka athumele kubo Federal Express ukufanelekela ukukhululwa moya ye pet.
inyathelo lesihlanu – ukufika ngamana ukungena Hawaii kuphela Airport International Honolulu kuphela phakathi kwentsimbi ye 8 mna kunye 9 pm. pet bakho baya kuthatyathwa ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya ukuya kumbindi ngokuhlaliswa zibekwe 99-951 Halawa Valley Road, iea, Hawaii 96701 – umnxeba 808 483-7151.
Uya uthabathe pet benu ngelo ekuyo
Ngaba Kukho Into Njengoko umlo Good kulwalamano?
5 Izinto Ofanele yokuthetha On A Umhla First